हाम्रो जन्मदिनमा आमाबुबाले टीका लगाएर आसिर्बाद दिएपछी लड्डु खाने हो : युवराज संग्रौला - Himali Patrika
हाम्रो जन्मदिनमा आमाबुबाले टीका लगाएर आसिर्बाद दिएपछी लड्डु खाने हो : युवराज संग्रौला
हिमाली पत्रिका १३ फाल्गुन २०७६, 9:38 am
समयका बारेमा पुर्व र पश्चिममा फरक फरक धारणा छन। पुर्बमा समयलाइ चक्रका रूपमा हेरिन्छ। यो कहिले पनि सकिंदैन, दोहोरिन्छ निरन्तर। तर समय दोहिरिन्छ भन्दा, घटना पनि दोहोरिन्छ्न भन्ने होइन। यसअर्थमा, मेरो “हिजो” “आजका” रुपमा पुनरावृत्ति भएको हो। यो नयाँ होइन, परिपक्वता मात्र हो।
यदि मैले हिजोलाई बिदागरें भनें मेरो अस्तित्वलाई मैले कम्जोर बनाएको हो। मेरो आजको सफलता हिजोको निरन्तरता मात्र हो। भगवत गीतामा कर्मको कुरा छ। कर्म भनेको “कारण” हो। म जे कारणलाई सक्रिय पार्छु, परिणाम तेहि आउने हो। बुद्धले यस्लाइ अझ परिस्कृत गरेर कारणको सिद्धान्त निर्माण गरे।
उन्ले कारणले परिणाम जन्माए पछि, त्यो परिणाम कारणमा रुपान्तरण भै अर्को परिणाम सिर्जना गर्छ, र यसरी परिबर्तन निरन्तर हुँदै तेसबाट बिकास (इभोलुसन) निशृत हुन्छ भनी बताए। यसर्थ समय आपसमा अभिन्न रुपले जोडिएको हुन्छ। “समयको यस मान्याता अनुसार हामी हिजो सकिएको र आज स्थापित भएको दिनको होइन आज सकिएर भोलि पुनाराबृती हुने दिनको सुभकामना वा रचनात्मकताको कामाना गर्छौं। जन्मदिनको अर्थ यो हो हाम्रो संस्कृतिमा।
संस्कृति परिबर्तन हुन्छ। केक काटे हुन्छ। तर केक किन काटेको हाम्रो संस्कृति नराम्रो वा दर्सनहिन वा अधारहिन भएर? यदि तेसो भएर हो भने ठिक छ। तर पस्चिमी संस्कृति राम्रो भएको ठानेर हो भने तेस्ले नेपाली संस्कृति समाप्त पार्छ।
पस्चिमी दर्सनले समयलाई सिधारेखा मान्छ। यो शुरु भएपछि आज सम्म निरन्तर आइरहेको छ र पहिलाको समाप्त भै नयाँ शुरु हुन्छ। तेसैले केक काटेको हिजो सकिएको समयलाई बिदा गरेको हो। यस्ले मेरो बिगतसङ्ग मलाइ फरक गर्छ। उनीहरुको मान्यतालाई हामीले इन्कार गरेको छैन। तर पश्चिमले पुर्वको मान्यता मिस्टिक छ भन्छ। हामी समयलाई बेवास्ता गर्छौ भन्ने आलोचना पनि छ। तर त्यो हाम्रो दर्सनका कारणले होइन, उपनिबेशको देन हो। उपनिबेशमा रैथाने जनतालाई पाहिला आइपुग्ने अधिकार थिएन। पहिला गोरा मानिसहरु प्रबेश गर्थे र रैथाने अन्तमा प्रवेशगरि पछाडि बस्थे।उपनिबेशले निर्माण गरेका थुप्रै भेदभावलाई हामिले संस्कृति ठान्यौं। गालामा केक कुकुरलाई चटाउन हो भनी लेखेको पांए। हाम्रो त यस्तो परमपरा छैन।
हाम्रोमा जन्मदिन भोलिका लागि सुखद कामनाका लागि हो। आमाबुबाले टीका लगाएर आसिर्बाद दिएपछी लड्डु खाने हो। सेलरोटि गोलो हुन्छ, तेसैले जन्मदिनमा सेल रोटि खाने हो। जन्मदिनमा आमाको हातको, आमा नभए भाउजुको दिदिको हातको, श्रीमती/श्रीमानको हातबाट खाने हो। यो आसिर्बाद हो। बहिनी भाइ छोरिछोराको चै स्नेह हो।
हाम्रा नेताहरू ६० किलोको माला, विशाल केक, ठुलठुला दलबल किन चाहानु हुन्छ? वंहाहरु त जनताका लागि उदाहरण हुने हो नि! केकमा नेपालको नक्सा काट्नु हुने कि नहुने बहस चल्यो। एकथरी संसारभरीका उदाहरण राख्दै छ्न। अर्का थरी मुटु चिरिएको कथा लेख्दै छन। यी दुबै आग्रही र पुर्वाग्रहि छ्न। यथार्थ के हो? हामी चीन र भारतका बिचमा अस्तित्वको जोखिम महसुस गर्छौ। तेसैले केकलाई नेपाल बनाएर काट्दा अस्वाभाविक लागेको हो। यो आलोचना भन्दा संझाउने कुरा हो।
गर्ने ले पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिमु पर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पटक नाजायज विवादमा ल्याउने काम भयो। के.पि ओलिलाई बुझ्ने र प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्ने कुरा फरक हुन। प्रधानमन्त्रीलाई बिवादमा ल्याउद देश बिभाजीत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका नीति र बिचारको बिरोध गर्न पाइन्छ। जन्म दिन प्रधानमन्त्रीको होइन के पि ओलिको हो। समाचार लेख्नेले प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन लेखेपछि अल्पग्यान कति रहेछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ अब।
राष्ट्र मरोस बरु मेरो स्वार्थ पुरा हुनुपर्छ भन्ने अराजक मानसिकता त पशुपतिका फुल लुट्ने र पर्खाल चड्नेले देखाएका छ्न। हामीमा सिभिक सेन्स छैन। जो सुकैले सत्ता चलाए पनि उस्तै हो। तेसैले एउटा समृद्ध बिचारको निर्माण र तेस्कै आधारमा देशलाई अगाडि लाने सपना निर्माण गर्ने कुरा अबको बाटो हो जस्तो लाग्छ। बिरोधले भत्काउंछ बनाउदैन। निर्माणले नयाँ बनांउछ र पुरानालाइ भत्किन बाध्य गर्छ।